wararka maanta-arlaadii.net » Maamulka Gobolka Hiiran Oo Dignin u diray Dadak Dacwada u aada Shabaab
Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa soo saaray digniino ku aadan dadka u maxkaamd doonta deegaanada Al-Shabaab ay ka joogaan Gobolka Hiiraan.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Hiiraan Maxamed Nuur Dabaashe ayaa sheegay inay tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadayaan dadka taga deegaanada Shabaab ay ka joogaan Hiiraan, si ay ugu soo xukumaan arrimaha dhulalka iyo sidoo kale dacwadaha kale ee dilalka la xiriira.
Meelaha loo dacwad tago ayuu sheegay inay qayb ka tahay Maxkamado Shabaab ay ku leeyihiin deeganada Quracleey iyo Booco, Gobolka Hiiraan ayuu sheegay iney ka jiraan Maxkamadaha Madaniga iyo tan Ciidamada.
Waxa uu Afhayeen Maxamed Nuur Dabaashe sheegay in dadka lagu soo dacweeyo Shabaab, wixii soo gaara ay masuuliyadooda qaadayaan dadka soo eedeeyaa oo aan laga aamusenin arimahaas.
Waxa uu soo qaatay masuuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Hiiraan oo uu sheegay inay ku hanjabeen inay u maxkamad doonanayaan Al-Shabaab, arinkaas ayuu ku tilmaamay inay tahay mid masiibo ah oo aan loo baahneyn xiligan.
Digniin taa la mid ah waxaa horay u soo saaray Taliyaha Nabad Sugida Gobolka Sh.Dhexe oo sheegay iney la xisaabtamayaan dadka aada deegaanada Shabaab, si ay maxkamado uga soo helaan.